“Ronaldo wuxuu noqon doonaa kan ugu fiican sanadkan, wuxuuna dhalin doonaa goolal badan” – Gool FM
(Turin) 22 Agoosto 2019. Weeraryahankii hore kooxo fara badan sida Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal, Chelsea. Juventus iyo sidoo kale xulka qaranka Faransiiska ee Nicolas Anelka ayaa sheegay in Cristiano Ronaldo uu ka fiicnaan doono sidii xilli ciyaareedkii hore, isla markaana uu dhalin doono goolal badan.
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa xagaagii hore u soo dhaqaaqay kooxda Juventus, kaddib markii uu kaga soo biiray Real Madrid.
Cristiano Ronaldo ayaa u dhaliyay kooxdiisa haatan ee Juventus 28 gool, 43 kulan uu u saftay dhamaan tartamada kala duwan xilli ciyaareedkii hore ee 2018.2019.
Haddaba Nicolas Anelka ayaa aaminsan in waxqabadka Cristiano Ronaldo ee kooxda Juventus uu ka sii fiicnaan doono sidii uu ahaa xili ciyaareedkii hore, sida ay qortay shabakada Goal.com.
Halyeeyga kubadda cagta ee dalka Faransiiska ee Nicolas Anelka ayaa yiri:
“Waxaan u malaynayaa in Cristiano Ronaldo uu ka fiicnaan doono sidii xilli ciyaareedkii hore”.
“Xaqiiqdii wuxuu la qabsaday horyaalka Serie A, wuxuu ku fiicnaa Juventus, xili ciyaareedkan wuxuu noqon doonaa mid ka awood badan sidii hore, wax shaki ah kama qabo arrintaas, dhaawac la’aan iyo ganaax la’aan, wuxuu dhalin doonaa goolal badan”.
“Juventus waxay soo iibsatay ciyaartoy aad u fiican xilliyadii ugu dambeeyay, waxayna ahaayeen kuwo aad ugu xeel dheeraa istiraatiijiyadda kala iibsiga”.